#BIM - Koorsada Naqshadeynta Qaab dhismeedka iyadoo la adeegsanayo AutoDesk Robot Structure - Geofumadas
Abriil, 2019 Koorsooyinka AulaGEO
Tilmaam dhammaystiran oo ku saabsan adeegsiga Falanqaynta Dhismaha Robot ee qaabaynta, xisaabinta iyo qaabeynta dhismayaasha la taaban karo iyo birta
Koorsadani waxay daboolaysaa adeegsiga barnaamijka Xirfadlayaasha Robot Strogram-ka xirfadeed ee loogu talagalay qaabeynta, xisaabinta iyo qaabeynta walxaha dhismayaasha ee dhismayaasha la taaban karo ee la xoojiyay iyo dhismayaasha warshadaha birta.
Koorso loogu talagalay naqshadeeyeyaasha, injineerrada madaniga ah iyo farsamoyaqaannada aagga ku dhex nool oo doonaya in ay sii qoto-dheer u adeegsadaan Robot-ka si loo xisaabiyo qaab-dhismeedka madaniga ah iyadoo la raacayo qawaaniinta ugu caansan adduunka iyo luqadda ay doortaan.
Waxaan ka wada hadli doonaa qalabka abuuritaanka qaab-dhismeedka (qoryaha, tiirarka, alwaaxyada, derbiyada, iyo kuwa kale). Waxaan arki doonaa sida loo sameeyo xisaabinta kiisaska mowduucyada fudud iyo seismic, iyo sidoo kale adeegsiga heerarka ku habboon culeysyada seismic-ka iyo qaabeynta naqshadaynta caadada. Waxaan baran doonna guud ahaan qulqulka shaqada loogu talagalay qaabeynta walxaha la taaban karo ee la xoojiyay, waxaan hubinnaa hubka loo baahan yahay iyadoo lagu xisaabinayo tiirarka, looxa iyo alwaaxa dabaqa. Sidan oo kale ayaan si dhow u eegi doonnaa aaladda RSA ee awoodda leh ee ku saabsan faahfaahinta walxaha dhismaha qaab dhismeedka xoojinta shaqsi ahaan ama isku darka. Waxaan dib u eegi doonaa sida loo soo bandhigo cabirrada caadiga ah ee qorshaha iyo meelaynta ee birta xoojinta tiirarka, guluubka, alwaaxyada, darbiyada iyo aasaaska tooska ah ee go'doonsan, la isku daray ama la ordayo.
Koorsadan waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo aaladda RSA ee naqshadeynta iskuxirka birta, abuurista aragtiyo istiraatiiji ah, abuurista qoraallada xisaabinta iyo natiijooyinka iyadoo la raacayo heerarka caalamiga ah.
Koorsadani waxaa loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo toddobaad gudihiis, iyada oo loo qoondeeyey qiyaastii laba saacadood maalintii si loo xaqiijiyo jimicsiyada aan wada horumarin doonno inta lagu gudajiro koorsada, laakiin waad ku socon kartaa xawaaraha aad ku dareemayso deganaan.
Inta lagu gudajiro koorsada waxaan soo saari doonaa labo tusaale oo wax ku ool ah oo naga caawin doona kiis kasta si aan u aragno qaabeynta iyo qaabeynta aaladaha la taaban karo iyo birta sida ay u kala horreeyaan.
Haddii aad iska diiwaangeliso koorsadan, waxaan dammaanad ka qaadaynaa inaad noqon doonto mid aad u hufan oo sax ah markaad fulinayso mashaariic dhisme, iyo sidoo kale inaad gasho adeegsiga aaladda naqshadaynta leh astaamo badan, adigoo ah xirfad sare oo hufan.
Moodellada iyo nashqadeynta ayaa xoojisay dhismayaasha la taaban karo iyo birta ee RSA
U samee qaab joomatari ah barnaamijka
Abuur moodhalka falanqaynta ee qaab-dhismeedka
Abuur xoojinta birta oo faahfaahsan
Xisaabi oo naqshadee iskuxirka birta iyadoo la raacayo xeerarka
Waa inaad horeyba u yaqanaan dhinacyada fikirka fikirka ee xisaabinta qaabdhismeedka
Waxaa lagugula talinayaa in barnaamijka la rakibo ama ku guuldaraysto in lagu rakibo nooca tijaabada
Koorsadan RSA waxaa loogu talagalay naqshadeeyeyaasha, injineerada madaniga ah iyo qof kasta oo laxiriira xisaabinta iyo qaabeynta qaabdhismeedka
Post Previous" Hore #BIM - Koorsada Mashruuca Dhismaha (Qaab dhismeedka + Robot + steel)
Post Next Warkii ugu fiicnaa ee wararka QGIS 3.XNext »